Ingabe Uyisisulu Sezingozi Zokuphuza Nokushayela e-UAE | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Ukuphuza nokushayela izingozi e-UAE akuvunyelwe futhi elinye lamacala abukwa kakhulu esifundazweni. Ngokuphikisana nezinye izindawo, i-UAE ayinamkhawulo osemthethweni wotshwala wegazi. Abenzi bokubi bangathathwa bavalelwe amahora angafinyelela kwangu-48 kanti futhi nomshayeli wemoto kuzodingeka anikeze umchamo namasampula egazi ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini izinkomba zanoma iziphi izinto ezidakayo. Umuntu angabe esedluliselwa ekushushisweni komphakathi, okufuna isijeziso ezinkantolo ngokuya ngobucayi becala futhi okuzohlaziya umlando wobulelesi womshayeli.
Abenzi bokubi kumele bathathe isigaba sokuphepha emgwaqeni ngaphambi kokuba bavunyelwe emuva endleleni yakho.
Uma kwenzeka umshayeli wemoto engaphansi komgwaqo ephikisanayo, umshuwalense cishe ngeke abe yilapho engekho (ngisho noma ehlulekile ukulimala).
Izinhlobo zokuphuza kanye nezingozi zokushayela e-UAE
Inqwaba enkulu yokulimala komgwaqo ihlobene nokushayela edakiwe. Kuyinto engavamile, kodwa-ke, umshayeli ophuzile uzovela engozini engalutholi ngenkathi umshushisi noma i- ummeli ongenacala angabekezelela umonakalo omkhulu kakhulu. Iqiniso liwukuthi ezimbalwa zalezi zimo zibulalayo ngempela zingabangela ukufa okusheshayo. Izingozi zokushayela eziphuzile ziqhubeka zenzeka ngenkathi iziphathimandla zingakhulumi phakathi kwemithwalo yabo yokucebisa abantu ukuthi ukuphuza nokushayela ngeke kuhambisane kahle.
Kunezimo ezihlukahlukene zokulimala okushayela izidakamizwa:
Phakathi kwezikhathi eziningi, noma kunjalo, isisindo esiningi ngokweqile imoto. Kwesinye isikhathi, lokhu kwenzeka lapho abashayeli ababili abadakiwe ezimotweni ezihlukile beqala ukuklolodelana ngokuthi ngubani umshayeli omkhulu. Njengamanje, bangaqala ngokuzenzekelayo umjaho wamafomu enkabeni yomgwaqo omatasa noma umgwaqo omkhulu. Ngeke kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi omunye wabo azoshayisa imoto engenacala. Ngokwemvelo, ukulahla okuyingozi kuzohambisana nalolu hlobo lokushayela, njengokuthi ukuphela kwezimoto zangempela ezihambayo.
Lapho umshayeli ophuzile engavumi ukukhanya okubomvu kwenzeka uhlobo olwehlukile lokulimala kokushayela uphuzile. Ukushayela esimweni sezulu esiyingozi ngenkathi ungaphansi kwethonya lemimoya kungaba enye imbangela yokulimala kokushayela uphuzile. Ngokwemvelo, amandla okushayela, okuholela ekulimaleni kwamandla akhe okwenza izinqumo eziphumelelayo angathinteka ngophuzo oludakayo.
Ezinye izinhlobo zezingozi zokushayela ezidakayo iqukethe ukuphela kokuphela nokuphazamiseka kokuphela. Uma kungenzeka ube yisisulu esingenacala salezi zinhlobo zokulimala kokukodwa futhi ubekezelele izinga elithile lokulimala, bekungaba ukuhlakanipha ukuthola iseluleko kummeli wengozi ye-DUI khona manjalo ukuze uthathe ezinye izinyathelo zomthetho ezifanele . Mayelana nenani lokulimala okuthole, ummeli wakho angafuna ukuthi umenzi wobubi abhekane nezinye izindleko kanye nokulaliswa kwakho esibhedlela.
Impact of Drinking and Driving Accidents ku-UAE kanye noMmeli Wobungozi Buntu Ongasiza
The Inombolo yezidakamizwa zokushayela izidakamizwa zanda kakhulu e-UAE ngamaphesenti angu-175. Abantu abahlukumezekayo bakhuthazelela ukulimala okunzima okungenakukwazi ukuzinakekela futhi badinga isikhathi sonke, ukunakekelwa kwansuku zonke kumalungu omndeni nabahlengikazi, kanye nokwelashwa okuvuselelayo. Mhlawumbe umuntu angahle abuyele emuva, kusukela ekulimaweni kwakho. Ikhwalithi yakho yokuphila iyaqhubeka ithinteka ngokujulile. Awunakucabangela usuku ngaphandle kobunzima bomlenze noma emuva.
Uma kunguwe noma umuntu omkhathalelayo, ufanele ukunxeshezelwa ngokuhlupheka kanye nomphumela ingozi eye yaba nawo empilweni yakho. Ngalesi sizathu kuphakanyiswa ukuthi umane thola ku-a Ummeli Wokulimala Komuntu siqu, ikakhulukazi ummeli onomsebenzi omelela izisulu zokulimala okushayela.
Ummeli Wobungozi Bomuntu siqu anga:
Iyakwazi ukusebenzisa abahlinzeki, odokotela, nomhlinzeki wakho womshuwalense ukuqinisekisa ukuthi uthola ukunakekelwa kwezempilo okufanele, ikakhulukazi lapho izinkampani zomshuwalense zifuna ukusika izinsika nganoma iyiphi indlela abakwaziyo.
A ummeli uqinisekise ukuthi unakekelwa ngokuhamba kwesikhathi, futhi uyakwazi ukugcina ukuthi uvele ukhokhelwa ubuhlungu nokuhlupheka kwakho kanye nabathandekayo bakho basinda.
Ummeli unakho bona ukuthi unxeshezelwa yini amaholo alahlekile esikhathi esizayo ngenxa yokwehluleka kwakho noma amandla okulinganiselwe ukusebenza.
Ngokuyinhloko, ummeli wokulimala e-UAE, Dubai, Abu Dhabi noSharjah uyakwazi ukukhuthaza amalungelo futhi afune ubulungiswa ngawe uqobo ngesikhathi esinzima kakhulu empilweni yakho. Sonke isikhathi ngaphandle kokuthi wenza, abaqoqi imali, okusho ukuthi unakho konke okutholayo ngokuxhumana noyedwa futhi ungalahlekelwa lutho.
Your ummeli angathola izindlela ngendlela engcono yokuthola imali yakho uma kwenzeka umenzi wobubi ekhuluma ukuthi ngeke abe nenani elikhulu lemali ukumboza umonakalo owenze. Wakho Ummeli Wokulimala Komuntu siqu njalo unelungelo lokumangalela umonakalo kusuka ejensi lakho lomshuwalense lomshayeli odakiwe.
Umshushisi we-UAE Uxwayisa Ukuphuza Nezingozi Zokushayela:
Abantu abalokothi bangene esondweni ngemuva kokuphuza kanye - ukuphuza utshwala obuncane kuphela kuyicala lobugebengu.
UMnu Hafani wachaza amacala ahilelekile ezizweni ezihlukene, kodwa ikakhulukazi abantu ababengaveli kuma-Arab hhayi amaSulumane.
Ngemuva kokushayisana ngokuvamile bathola.
The umthetho uthi utholakala udakiwe ngemuva kwesondo kuthatha inhlawulo encane ye-Dh20, amaphuzu amnyama we-24 kulayisensi yakho, i-000, kanye nemoto yakho cishe iyoyithathwa izinsuku ezingu-60.
Ukudambisa amaphoyisa amashayeli ngokushesha azobe esehamba eduze kwamakilabhu nezindawo zokungcebeleka ezisebenzela u-booze.
The ukubhekwa okuqhubekayo kuhlose ukugwema noma yikuphi ukuziphatha okuyinto engaphazamisa ukusakaza kwezimoto nokuphazamiseka komsindo, wachaza.
Ukuphuza Nokushayela Izingozi E-UAE Occur Daily: Zivikele Wena
Ungahle ungazi ukuthi ngubani osengozini noma ukulimala okuvamile kokuphuza nokushayela. Ukulimala kokushayela uphuzile akugcini kubantu abadala.
Ukushayisana kwemoto kwenzeka ngezinhloso ezihlukahlukene, kodwa lezo zilimala okungenakugwema nje ngokuyeka umsebenzi wakho obungozi uma izinto ezifana nokuthumela imiyalezo neziphuzo zibizwa. Emva kokuphuza okuncane kodwa ngisho noma uqonda ukuthi ungaphuzi futhi uphuze ungenza okuthile okumangazayo.
Ukushayela ngemuva kokuphuza kuyalinganiswa nokuqukethwe kwegazi kotshwala we-motorist. Ngokudabukisayo abanye abantu bathola ngemuva kwesondo bese bephula umthetho.
Uma usufunde uzodinga ukushayela, umthetho oyinhloko awufanele uphuze. Lesi seluleko singakusiza ukuba uchithe ngokucacile ukwenza ukhetho olubi futhi uhlale uphethe inkinga:
Nika umzimba wakho isikhathi esiningi sokuthola umphumela wokuphuza utshwala.
Ungacabangi ukuthi ngoba unebhiya nje awumubi ukusebenzisa imoto, isiphuzo siyisiphuzo futhi akumele ushayele ngemuva kokuphuza.
Vele wenze lokhu nabantu obethembayo ngempela. Uma kwenzeka uhlela ukuphuza, noma uhlele ukuba uthathwe kusuka ebhashini nomngane okhuni noma umzali.
Gcina inombolo yocingo yenkonzo yekolishi esikhwameni sakho kanye nemali ephuthumayo.
Izingozi zokushayela nokuphuza e-UAE zivame ukungagcini ngokubeka umshayeli engozini kodwa futhi nabahamba ngezinyawo nabanye abashayeli. Ungaphuzi bese ushayela!